I-Nandrolone Phenylpropionate (NPP) powder (62-90-8) ≥98% | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / I-Nandrolone powder Series / Nandrolone Phenylpropionate (NPP) powder
SKU: 62-90-8. iindidi: I-Nandrolone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-mass order ye-Nandrolone Phenylpropionate (NPP) powder (i-62-90-8), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ividiyo ye powder
I-Raw Nandrolone i-Phenylpropionate (NPP) iifowuni
igama: I-Nandrolone Phenylpropionate (NPP) powder
I-molecular Formula: C27H34O3
ekrwada I-Nandrolone Phenylpropionate (NPP) ukusetyenziswa kwe powder kumjikelezo we-steroids
I-Raw Nandrolone iPhenylpropionate powder ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yi-NPP powder (i-CAS 62-90-8) ngabanini bomzimba okanye abakwaGGL.
Ukusetyenziswa kwe-Raw Nandrolone Phenylpropionate powder
I-Nandrolone phenylpropionate yinto elula, ngoko ufuna ukuyiqhuba kwi-300-400 milligrams (mgs) ngeveki kwiziphumo ezilungileyo. Abanye abasebenzisi baya kuqhuba i-dosage ephantsi kwi-stack ukuze bancede ngamalungu, kodwa akukhuthazwa ukusebenzisa le steroid ngenxa yesizathu sodwa, njengoko unokubangela umonakalo omkhulu kwingozi ekhoyo kwenkqubo.
Isilumkiso kwi-Raw Nandrolone Phenylpropionate powder
Gcina ukhumbule ukuba i-nandrolones ayiyi kuhlasela nje i-estrogen receptors, kodwa kunye ne-progesterone receptors, ngoko ke kufuneka usebenzise i-cabergoline kunye nayo ukuze ugcine amanqanaba e-progesterone phantsi kolawulo.
Njengazo zonke i-anabolic steroids, i-nandrolone phenylpropionate inxinzelelo, ngoko-ke ityrapy ye-post-cycle epheleleyo (PCT) iyadingeka ukunika umsebenzisi indawo elula. Njengoko sele kukhankanywe ngasentla, iindaba ezilungileyo kukuba ngenxa ye-ester emfutshane iNPP iphume kwenkqubo ngokukhawuleza kunokuba umzalwana wakhe omkhulu u-deca durabolin.
I-Nandrolone iPhenylpropionate yokuPhengisa
Indlela yokuthenga i-Raw Nandrolone iPhenylpropionate powder (CAS 62-90-8); ukuthenga i-NPP powder AASraw
I-AASRAW Nandrolone phenylpropionate / i-NPP isetyenziswe ngabadlali abanomlinganiselo wokufumana ubunzima bemisipha kunye namandla, engaziwa ngaphantsi kwe-DECA.
Iphenylpropionate (NPP) powder (62-90-8) Recipes:
I-Raw Nandrolone i-Phenylpropionate (NPP) i-powder Recipes (Ukubhekisela kuphela)